Optometrists Job Description / တာဝန် Template ပြီးတော့ Functions များ - JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / Uncategorized / Optometrists Job Description / တာဝန် Template ပြီးတော့ Functions များ
Optometrists Job Description / တာဝန် Template ပြီးတော့ Functions များ
ယာကုပ် ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized 1 မှတ်ချက် 528 views
ရောဂါအမည်ဖေါ်, စီမံခန့်ခွဲ, and treat disorders and ailments of the human eye and visual system. Study eye and graphic process, identify impairments or issues, recommend corrective contacts, and offer remedy. Might suggest healing drugs to treat particular vision situations.
ပေး, suggest, alter and healthy perspective supports that are other as well as glasses, အဆက်အသွယ်.
Active-Listening-Supplying entire focus on what other folks say, using time and energy to comprehend the things being created, စံပြအဖြစ်မေးမြန်းမေးခွန်းများကို, နှင့်လက်မခံနိုင်ဖြစ်ကြောင်းသာဓကမှာကြားဖြတ်ဘယ်တော့မှ.
Tracking-TrackingPEREvaluating effectiveness of oneself, အခြားအဖြစ်ကြောင်းကိုတစ်ဦးချင်းစီ, or corporations consider remedial action or to produce enhancements.
လူမှုအခြားသူများကိုမသိမဟုတ်သိနားလည်နိုင်စွမ်းကို-ဖြစ်ခြင်း’ သဘောထားတွေနဲ့အသိပညာသူတို့ကျင့်သောကြောင့်သူတို့ reply ဘယ်ကြောင့်.
အရစ်ကျ-ထည့်သွင်းခြင်းထုတ်ကုန်, ထုတ်ကုန်, cabling, လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဒါမှမဟုတ် applications များ.
Quality-Control Evaluation-Performing inspections and checks of products, န်ဆောင်မှုများ, or functions to judge efficiency or quality.
Systems Analysis-Determining what sort of method must perform and how adjustments in functions, ဝေဒနာတွေက, along with the surroundings may affect outcomes.
Management of Savings-Determining how cash will be spent to acquire the job performed, ဤအအသုံးစရိတ်များနှင့် ပတ်သက်. နှင့်စာရင်းအင်း.
Operations of Product Assets-Finding and observing towards the appropriate utilization of devices, အင်္ဂါရပ်များ, နှင့်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများမရွေးအလုပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့.
Supervision of Personnel Resources-Pointing individuals because they, ထူထောင်, နှင့်လုပ်ဆောင်တွန်း, pinpointing the very best people for that career.
အောင်မြင်မှု / ကြိုးပမ်းမှု – %
ခေါင်းဆောင်မှု – %
လူမှု Alignment – %
ဘက်စုံ / Mobility ကို – %
Pingback: Interview Confidently - Ten Proven Preparation Techniques - ဟာဝိုင်ယီကျောင်းသားအိမ်ရာ & Suites များ | HonoluluHawaii ကျောင်းသားအိမ်ရာရှိတိုက်ခန်းများငှားရန်ရှိသည် & Suites များ | Honolulu ရှိတိုက်ခန်းများငှားရန်ရှိသည်